Deg-Deg: Juventus ayaa la soo waregtay Howedes
Sunday, May 27th, 2018 - 12:25:43
Thursday August 31, 2017 - 04:45:04 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Juventus ayaa dhameystirtay saxiixa daafaca Germany Jerome Benedikt Howedes kaasoo ka yimid Schalke heshiis hal sanno ah.
Juventus ayaa ku dhawaaqday inay heshiis la gaartay Schalke 04 ciyaaryahanka Benedikt Howedes ayaa lagu soo gabagabeeyay 3.5 milyan euro ah oo la siinayo 15ka September 2017.
Juventus ayaa xaq u leh inay si toos ah u soo iibsato ciyaartoyda laga bilaabo 1da July 2018, ama waxaa waajib ku ah inay sameeyaan hadii ciyaaryahanka uu buuxiyo 25 ama wax ka badan inta uu u ciyaarayo xilli ciyaareedka 2017/18.
Howedes wuxuu bilaabay inuu kubada cagta ciyaaro kooxda TuS Haltern sanadkii 1994-tii. Sanadii 2001, waxaa loo wareejiyay kooxda dhalinyarada ee FC Schalke 04. Sanadkii 2003, wuxuu noqday kabtanka kooxda Schalke 19-sano jir wuxuuna xubin ka yahay kooxdaan Laga soo bilaabo 19 jirkii Bundesliga 2006.
Bishii September 2007, Jarmalka Xiriirka Kubadda Cagta Jarmalka ayaa sharfay Howedes oo uu la qaaday Fritz Walter Medal isagoo ahaa ciyaaryahanka ugu fiican da'diisa xilli ciyaareedkii 2006-07.
Bishii Janaayo 2007, waxa uu saxiixay heshiis qandaraasle ah oo uu kula jiro Schalke, kaasoo ku kacay 30 June 2010, ka dib markii uu ku biiray kooxda Schalke ee Bundesliga bishii July.
Si kasta oo uu ahaado Oktoobar 2007, wuxuu kaliya u soo ciyaaray kooxda labaad ee Schalke ee Oberliga (qeybtii afaraad).
Howedes 'ciyaartii ugu horeysay ee xirfad ahaan wuxuu ku jiray Champions League 3dii October 2007. Kadib, 10kii December 2008, Howedes wuxuu kordhiyay qandaraaskiisa kaas oo ku sii hayn doona ilaa 30ka June 2014. 23kii July 2011, Hovedes wuxuu noqday kabtanka kooxda Schalke.
9kii Maarso 2013, Howedes wuxuu qandaraaska u kordhiyay kooxda Schalke ilaa 30 June 2017.
Ku soo dhawaaw Juventus - Benedikt Howedes 'xirfadle cajiib ah.